Safiya Yaasiin, Musharrax Madaxweyne Puntland: “DP World dalkay duullaan ku tahay oo loo qoor-qabanayaa Itoobiya” – Radio Daljir
Maarso 12, 2018 11:20 g 0
Marwo Safiyo Yaasiin oo u taagan xilka madaxweynimo ee dowladda Puntland, ahna aqoonyahan si weyn ugu ololeysa ilaalinta danaha guud ee qaranka Somaliyeed ayaa wareysi gaar ah oo ay siisay Radio Daljir waxa ay si diirran u soodhaweysey go’aankii uu maanta golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ka gaaray heshiiskii Dekedda Berbera, go’aankaas oo shirkadda DP World looga mamnuucay guud ahaanba dalka Soomaaliya.
Safiyo Yaasiin oo kamid ah dadkii ugu horreeyey ee kasoo horjeestay wareejinta dekedaha Bossaso iyo Berbera, wax badanna arrimahaas ka qortay, ayaa tibaaxday in dulucda heshiisyadaasi awalba ay ahayeen in Soomaaliya loo gacangaliyo Itoobiya. Balse ay hadda aad ugu faraxsan tahay tallaabada uu qaaday Baarlamaanka Soomaaliya.
Musharrax Madaxweyne Marwo Safiyo Yaasiin oo ku sugan dalka Mareykanka, ahna gabadha kaliya ee illaa iyo hadda u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda Puntland ayaa ka hadashay waxa ku dhaliyey in ay xilka isu sharraxdo.
Marwo Safiyo Yaasiin ayaa sheegtay in taariikhdu xusi doonto halgankeeda ka-dhanka ahaa DP World iyo in aysan Carab iyo Itoobiyaan dalka nagala wareegin, laakiin kuwa DP World la saftay iyo kuwa isa soo sharrixi doonaa ayagu maxay hayaan oo miiska soo saari doonaan.
Safiyo waxa ay u warrantay Axmed Sh. Maxamed “Tallman” oo ku sugan studiyeheenna Daljir Bossaso.